FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA ANGLISY DANIFF DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika anglisy Daniff Dog
Alika lehibe mifangaro mifangaro / anglisy Mastiff mifangaro
Apollo ilay anglisy Daniff amin'ny 2 taona— 'Apollo dia Daniff izay be indrindra alika tsara fitondran-tena Efa nisy izany. Tao amin'ny fianakavianay izy hatramin'ny faha-10 taonany. Tia ankizy izy ary manana voajanahary voajanahary hiarovana ny zaza na dia ny zaza vao hitany aza. Mifandray tsara amin'ny alika hafa izy ary nanampy tamin'ny fampiofanana ny alika mpamonjy voina izay manana olana ara-toetra satria tsy masiaka mihitsy izy ary mirona amin'ny alika hafa. 145 lbs izy ary 34 santimetatra ny sorony tamin'ny faha-2 taonany ary nilanja 195 kilao tamin'ny faha-4 taonany. Tiany ny mikoropaka ary afaka miditra an-tsokosoko ao amin'ny vadiko sy ny farafara misy ny mpanjakavavy saika isaky ny adiny iray eo ho eo alohan'ny ilantsika handeha miasa. Ny alikanay rehetra dia raisina sy raisina ho mpikambana ao amin'ny fianakavianay ary ny ankamaroan'ny fotoanantsika dia lany aminy. Nijery an'i Cesar Millan aho ary nifanaraka tamin'ny filozofian'izy ireo foana. Namaky ny The Monks of New Skete How to be your Dogs Best Friend 'koa aho ary nampihatra ireo filôzôfia ireo tamin'ny fitaizana ny alika rehetra.'
Ny alika Daniff dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Great Dane ary ny English Mastiff . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ho 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
DKC = Daniff Kennel Club
American Canine Hybrid Club = Daniff
DBR = Drafitra mpamorona endrika = Daniff na Daniff lehibe
Designer Dogs Kennel Club = Daniff mahafinaritra
Mpanoratra International Canine Registry®= Daniff
Apollo the Daniff (Great Dane / Mastiff mix) amin'ny 2 taona
Finnegan dia herintaona ½ English Mastiff ary ½ Great Dane alika mifangaro (anglisy Daniff)
Finnegan dia herintaona English Mastiff ary ½ Great Dane mifangaro alika (Daniff)
'Manana zanak'alika Daniff roa volana aho, Harley sy Scooby. Samy milanja mihoatra ny 60 pounds. Nahazo karazany maro aho tamin'ny fiainako saingy alika mahafinaritra ireto Daniff roa ireto. Tena mitandrina sy be fitiavana amin'ireo zanako 3 taona sy 2 taona izy ireo. Tsy handeha hivoaka alika mihitsy aho raha tsy iray amin'ireo lehilahy ireo. Ireo no angatahina amin'ny alika. '
'Nentiko tany amin'ny Mastiff anglisy / Breziliana ny Dane-ko. Ny sary miraikitra nalaiko dia an'ny sasany amin'ireo pups ao anatin'ny fito herinandro. Tena sariaka izy rehetra ary tia milalao (tsy alika inona ny alika kely?). Manana ny toetran'ny Dane sy ny toetrany izy ireo. '
Alika fanampiny lehibe
mifangaro pitbull miaraka amin'ny ter Terre bull
mastiff anglisy mifangaro amin'ny rottweiler
Pitbull orona mena 1 taona
Rahoviana ny alika kely no tokony ho vaky trano
mainty laboratoara mastiff Mix alika kely
pekingese sy Lhasa apso Mix